Ngokuthe cwaka iphehlelela umdlalo osemthethweni we-fifa 17 kwi-android, uguqulelo lwe-ios luza kungekudala
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ngokuthe cwaka i-EA isungula umdlalo osemthethweni weFIFA 17 kwi-Android, inguqulelo ye-iOS eza kungekudala
Ngokuthe cwaka i-EA isungula umdlalo osemthethweni weFIFA 17 kwi-Android, inguqulelo ye-iOS eza kungekudala
UbuGcisa be-elektroniki buqinisekisile emva ngo-Agasti ukuba iyakuphehlelela isihloko esilandelayo seFIFA kuwo omabini amaqonga e-Android nawe-iOS oku kuwa. Sothukile kakhulu kukufumanisa ukuba umdlalo sele ukhutshiwe kuGoogle Play kule mpelaveki ngaphandle kwesibhengezo esiya kuphila.
Nangona kunjalo, umdlalo waphehlelelwa phantsi kwemoniker eyahlukileyo, iFIFA yeSoka yeBhola ekhatywayo, ngokunokwenzeka ukuze ugxininise kwinto yokuba le yi-100% yomdlalo weselfowuni, hayi nje izibuko elivela kwiikhonsoli.
Amagqala e-franchise angakuvuyela ukwazi ukuba i-EA yongeze i-Attack Mode entsha, engumdlalo osekwe ekujikeni onika amava e-asynchronous afaka iFIFA yeSelfowuni kwihlabathi liphela. Ukhetho lolawulo olutsha longeziwe ngokunjalo, njengokudlala ngokuzenzekelayo, intonga ebonakalayo kunye nolawulo lomzimba.
Ukubonelela ngenqanaba lokunyaniseka abalandeli beFIFA abakhangeleyo, i-EA ibhengeze ukuba umdlalo uza namaqela angaphezulu kwama-30, amaqela okwenyani angama-650, kunye nabadlali bokwenyani abangama-17,000.
Enye into ebonakala ngathi i-EA iyazingca ngayo yinto yokuba ukhuphelo lobungakanani beFIFA yeSoccer & apos; s ikhutshelwe ngaphantsi kwe-100MB, oko kuthetha ukuba abalandeli banokuyifumana ngaphandle konxibelelwano lweWi-Fi.
Kukwafanelekile ukuba uqaphele umdlalo ngoku unenkxaso kwiilwimi ezahlukeneyo, kubandakanya isiNgesi, isiFrentshi, isiBrazil, isiPhuthukezi, isiRashiya kunye nesiTurkey. I-EA iqinisekisile ukuba umdlalo uza kusebenza kwizixhobo zefowuni ezisebenzisa i-Android 4.1 kunye ne-iOS okanye ngcono.
Njengoko kukhankanyiwe kwisihloko, okwangoku, iFIFA yeSoka yeBhola ekhatywayo iyafumaneka kwizixhobo ze-Android, kodwa siyakrokrela ukuba uhlobo lwe-iOS luza kukhutshwa kwakamsinya.
Ibhola ekhatywayo yeFIFA yeSelfowuni iyafumaneka simahla kwaye ifuna unxibelelwano oluqhubekayo lwe-Intanethi. Ngokucacileyo, iza nokuthenga ngaphakathi nohlelo, ke ukuba awufuni kuchitha nayiphi na imali unokukhubaza olu phawu kwiiSetingi.
umthombo: Dlala kuGoogle nge Umdlalo wokuqala ( guqula )
fifa 17 umhla wokukhutshwa kwe-android
Uhlaziyo lweCrossy Road uhlaziyo: indlela yokuvula uphawu olufihliweyo lweTotem kwiMonument Valley
I-T-Mobile kunye ne-OnePlus zibetha i-AT & T kunye neApple ukuthatha i4G LTE kunye ne5G izithsaba zesantya eMelika.
Awuphambani, kwaye sisiphene seNdawo yeGoogle yeMephu
Isifundo seJava Generics -Zithini iiGenerics kwaye uzisebenzisa njani?
I-iPhone 13 yamandla ombane webhetri kunye nokuvuza kwebhetri
Kutheni le nto iWalmart inika amaqabane angama-740,000 iselfowuni yakwa-Samsung yasimahla?
UGoogle wongeza iT-Mobile voicemail yokukhuphela kwifowuni usetyenziso
I-SOL Republic ilandelela ukuphononongwa komoya
Ezona meko zebhetri zibalaseleyo kwi-Samsung Galaxy S6, kwi-Galaxy S6
Ukuqala kwescreen sokwahlulahlula kwi-Android 9.0 akukho lula njengepie